Bangiga (Salaam Bank) Oo Magaalada Bosaso Laga Furay Iyo Bare-sare (Maxamed Jaamac Xaashi) Oo Madax Looga Dhigay. – Codka Qaranka Tanadland
Bangiga (Salaam Bank) Oo Magaalada Bosaso Laga Furay Iyo Bare-sare (Maxamed Jaamac Xaashi) Oo Madax Looga Dhigay.
Bare-sare (Maxamed Jaamac Xaashi) oo in mudaa bare-sare ka ahaa jaamacado ku kala yaala magaalooyinka (Nairobi) iyo (Bosaso).
Shirkadda isgaarsiinta ee (Golis Telecom Soomaaliya) waxay 20 -kii bishatan feebaraayo ka furtay magaalada Bosaso bangi la yiraahdo (Salaam Bank). (Golis Telecom Soomaaliya) xafladdii furitaanka bangiga Salaam waxay ku soo bandhigtay qorsheyaal dhawr ah oo ay ku talajirto in ay fuliso. ayna ka mid yihiin bangiga islaamiga ah ee (Salaam Bank) iyo xarun cusub oo shirkadda u qorshaysan in ay ka dhisto magaalada Garoowe. xarunta cusub ee shirkadda (Golis Telecom Soomaaliya) oo ah daar 7 dabaq ka kooban, ayaa la filayaa in ay noqon doonto marka la ebyo daarta ugu dheer daaraha ku yaala gobolada Mudug, Nugaal iyo Bari.
“Muuqaalka xafiiska shirkadda Golis ay ku talo jirto in ay Garowe ka dhisto”, Bangiga (Salaam Bank) ayaa waxa uu ganacsatada soomaaliyeed u qabanayaa adeegyada lagu yaqaan bangiyada dunida muslimka intooda badan. ayna ka mid tahay noocyada kaladuwan ee maalgelinta xalaasha ah. magaalada Bosaso bangiga (Salaam Bank) bangigii ugu horeeyey ee laga furo maaha balse waa rug maaliyadeed iyo nooc beecmushtari cusub. walow bangiga (Salaam Bank) uu yahay bangi yar oo marka dhismaha xaruntiisa la fiirsho yaraanteeda, loo qaadan karo in bangiga (Salaam Bank) uu yahay bangi aan loogu talo gelin in uu faracyo kale yeesho, hadana wuxuu waxtar iyo dhiirigelinba u noqon doonaa bangiyada kale ee soomaaliyeed oo an ganacsigooda uga faa’iideysan habka casriga ah ee ay bangiyada islaamku u ganacsadaan.
(Golis Telecom Soomaaliya) xafladdii furitaanka bangiga Salaam waxay ku soo bandhigtay qorsheyaal dhawr ah oo ay ku talajirto in ay fuliso. Weriye: Saxardiid
Bangiga (Salaam Bank) waxaa maareeye looga dhigay bare-sare (Maxamed Jaamac Xaashi) oo in mudaa bare-sare ka ahaa jaamacado ku kala yaala magaalooyinka (Nairobi) iyo (Bosaso). shirkadda isgaarsiinta ee (Golis Telecom Soomaaliya) waa shirkad yar marka la bar-bar dhigo shirkadda (Telcom) faraceeda (Telcom Puntland). walow ay shirkad cusub oo hada labo sano jirsatay ay tahay (Telcom Puntland), hadana waa shirkad aad u baaxad weyn oo laga filayo in ay degaamo badan mashaariic aan ahayn isgaarsiin iyo koronto gelin ay ka hirgeliso. (Telcom Puntland) hawlaha isgaarsiinta marka laga reebo iyo internetka waxaa u wehesha koronto gelinta magaalooyinka.
Magaalada mashruuca ugu balaaran ee koronto gelinta ay ka hirgeliseyna waa magaalada Galkacyo. waxayna shirkadda (Telcom Puntland) keentay matooro kuwa korontada dhaliya ah oo casri ah. waxaana ay magaalada korontada siisaa 95% hada. waxayna shirkadu u suurto gelisey macaamiisheeda in ay helaan koronto joogta ah oo ay ka haqabeelaan. si kastaba arintu ha ahaatee waxaa hubaal ah in talaabada hurusocodnimada ah ee ay ku dhaqaaqday shirkadda isgaarsiinta ee (golis telecom soomaaliya), ay baraarujin u tahay shirkadda (Telcom Puntland) oo ad moodid hadda in ay hurudo.
Maqaal kaan waxaan ku soo xirayaa hambalyo iyo bogaadin aan u dirayo madaxda iyo ururka hantiileyaasha shirkadda (Golis Telecom Soomaaliya). Aniga oo u rajeynaya bangiga islaamiga ah ee (Salaam Bank) shaqaalihiisa iyo hawlwadeenadiisa, in ay noqdaan kuwo ku guuleysta hadafkooda horumarinta kaabeyaasha beecmushtarka iyo kobcinta dhaqaalaha.
Halkani Waa Codka Wadaniga Xalaasha Ah Ee Umadda Karaamaysan Ee Qaranka Tanadland. By: Saxardiid Xareed Bulxan.
'Becoming Chinese': Meet the first Somali with a Home Return Permit
Amaan Iyo Bogaadin Ku Socota Isimada Iyo Ergada Reer Tanadland Oo Umadda Tanadland Ugu Baaqay Shirka Taariikhiga Ah